‘झोला’को इतिहास ‘भोर’ले दोहोर्याउला ? « Ramailo छ
‘झोला’को इतिहास ‘भोर’ले दोहोर्याउला ?
केही साल पहिले सती प्रथाको विषयमा बनेको फिल्म ‘झोला’ले दर्शकको मन जित्यो । फिल्मले दर्शकको मनसँगै निर्माताको गोजी पनि भरिदिएको थियो । यसै फिल्मबाट नायिका गरिमा पन्तले राष्ट्रिय सहित विभिन्न अवार्ड तथा पुरस्कार पाइन् ।
विभिन्न किसिमले उत्कृष्ट ठहरिएको फिल्म ‘झोला’ बनाउने टिमले केही वर्षपछि ‘भोर’ नामक फिल्म बनाएको छ । के ‘भोर’ले ‘झोला’को इतिहास दोहोर्याउला ? त्यो बैशाख २१ पछि नै थाहा हुनेछ । तर निर्देशक यादव भट्टराईले फिल्मको कथा उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे।
तराईमा व्याप्त दाइजो प्रथाको कथाले दर्शकको मन जित्ने निर्देशक भट्टराईको विश्वास छ । ‘हामीले मधेशको दर्दनाक कथालाई उठाएका छौं’, निर्देशक भट्टराई भन्छन् । एक वर्ष लगाएर बनाएको फिल्मले मधेशको दाइजो प्रथा उन्मुलनमा सघाउ पुर्याउने विश्वास उनले राखे ।
यता भोर की मुख्य पात्र अनितारानीले मधेसमा दाइजो भाइरसको रुपमा रहि आएको बताइन् । ‘दाइजो प्रथालाई उन्मुलन गर्न भोरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’, रानीले भनिन् । कृष्ण धारावासीको ‘दाइजो मानव हिंसा हो’ भन्ने पुस्तकबाट प्रभावित फिल्मलाई यादव भट्टराईले निर्देशन गरेका हुन् ।
देवेन्द्रप्रसाद पराजुली कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा राज तिमिल्सिना र रामगोपाल थापाको संयुक्त लगानी छ । भोर मा रामनारायण यादव, अनितारानी मण्डल, राजेश सक्सेना, परमेश झा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।